साझ ९:३० बजेको ताजा अपडेट : स्थापितको वडामा को अगाडि ? - jagritikhabar.com
साझ ९:३० बजेको ताजा अपडेट : स्थापितको वडामा को अगाडि ?
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २८ मा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले अग्रता कायम राखेका छन् । अहिलेसम्म २२२१ भोट गणना भइसकेकोमा बालेनको पक्षमा ५७१ भोट आएको छ भने यस्तै, स्थापितले ५३९ र सिर्जनाले ५०७ भोट ल्याएका छन् ।
बागबजार क्षेत्रमा पर्ने वडा नम्बर २८ एमाले उम्मेदवार स्थापितको वडा हो । पछिल्लाे विवरण अनुसार बालेनकाे कुल मत २४ हजार ३३५ छ भने केशव स्थापितले १२ हजार ७१२ मत पाएका छन् ।
उता, ललितपुर उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका चिरिबाबु महर्जनले अग्रता कायमै राखेका छन् । ३४ हजार ३१९ मत गणना हुँदा चिरिबाबुले १७ हजार ८९१ मत पाएका छन् ।
एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले १० हजार १८८ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूको मतान्तर ७ हजार ७०३ रहेको छ । त्यसैगरी राप्रपाका मेयर उमेदवार अष्टबहादुर महर्जनले एक हजार ४३६ मत ल्याएका छन् ।
उपमेयरमा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीका बाबुराज बज्राचार्यले ७ हजार १६८ मत पाएका छन् । एमालेकी मञ्जली शाक्यले ९ हजार ९३५ मत ल्याएकी छन् ।
देशभर स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ । बिहीबार साँझ ६ः१५ बजेसम्म ५८४ स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ ।
निर्वाचन आयोगकाअनुसार मत मरिणाम सार्वजनिक भएकामध्ये नेपाली कांग्रेसले प्रमुख पदमा २५७ स्थानीय तह जितेको छ । कांग्रेसले १७० गाउँपालिका अध्यक्ष र ८७ नगरपालिका प्रमुख जितेको छ ।
नेकपा (एमाले)ले १६४ स्थानीय तह जितेको छ । एमालेले १०९ गाउँपालिका अध्यक्ष जित्दा ५५ नगरपालिका प्रमुख जितेको छ । माओवादी केन्द्रले ८९ गाउँपालिका अध्यक्ष र १६ नगरपालिका प्रमुखसहित १०५ स्थानीय तह जितेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल १५ वटा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छ । एकीकृत समाजवादीले ६ वटा मेयरमा जित हासिल गरेको छ । अन्यतर्फ २३ गाउँपालिका र १४ नगरपालिका प्रमुखमा विजयी भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
झापा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद नेपाली कांग्रेसले जितेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि जयनारायण शाह र उपाध्यक्षमा अञ्जुदेवी थपलियाले जीत हासिल गर्नुभएको हो ।
शाहले ६ हजार ७९८ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का गौरीशङ्कर राजवंशीले चार हजार ३६५ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
उपाध्यक्षमा निर्वाचित थपलियाले पाँच हजार ८६८ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका उम्मेदवार देवीमाया अधिकारीले चारहजा ३७१ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत झापा गाउँपालिकामा अध्यक्ष पद नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट शाहले नै जीत हासिल गर्नुभएको थियो । उपाध्यक्षमा एमालेबाट कुन्तादेवी बुढाथोकीले जीत हासिल गर्नुभएको थियो । सात वटा वडा रहेको यो पालिकामा पाँच वडामा वडाध्यक्षसमेत कांग्रेसले नै जीत हासिल गरेको छ । दुई वडामा भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले जीत हासिल गरेका हुन् । वडा नं ३ मा सुभासलाल गणेशले वडाध्यक्ष जित्नुभयो । त्यस्तै वडा नं ५ मा कृष्णप्रसाद राजवंशीले वडाध्यक्षमा जीत हासिल गर्नुभयो ।
झापा गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा कांग्रेसबाट राजकुमार यादवले दोस्रो कार्यकालका लागि वडाध्यक्षमा निर्वाचित बन्नुभयो । त्यस्तै वडा नं २ मा कांग्रेसबाट हिमालकुमार चम्लगाईं, ३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार सुभासलाल गणेश, ४ मा कांग्रेसका महमत ताहिर, ५ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार कृष्णप्रसाद राजवंशी, ६ मा कांग्रेसबाट नवीनकिशोर थापा र वडा नं ७ मा शखीचन्द्र ठाकुर निर्वाचित हुनुभयो ।